के भिटामिन सीले कोरोना निको पार्नसक्छ ? अनुसन्धानकर्ताहरु सफलताको नजिक – Saurahaonline.com
के भिटामिन सीले कोरोना निको पार्नसक्छ ? अनुसन्धानकर्ताहरु सफलताको नजिक
एजेन्सी । विश्वभर त्राहिमाम मच्चाएको कोरोना भाईरसको औषधी पत्ता लागउने क्रम अहिले पनि जारी नै छ । यो क्रममा विश्वका कतिपय वैज्ञानिकहरुले सफलताको नजिक पुगेको पनि बताईरहेका छन ।
त्यस्तै एक प्रयोग अमेरिकामा पनि गरिएको छ । कोरोना भाईरस संक्रमित विरामीहरुलाई भारी मात्रामा भिटामिन सी दिएर उपचारको नयाँ प्रयास गरिएको हो । भिटामिन सीले विरामीलाई कोरोनासंग लड्न सक्ने क्षमता दिने सकारात्मक परिणाम आएको तथ्य पनि अमेरिकी चिकित्सकहरुले फेला पारेका छन ।
अमेरिकाको लंग आईल्याण्डस्थित नर्थवेल्थ हेल्थ सेवासंग सम्बन्धित फोक्सो, श्वासप्रश्वास तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डा.एण्ड्र्यु जी वेबरले कोरोना पीडित विरामीलाई १५ सय मिलिग्राम ईन्ट्रावेनस भिटामिन सी दिएको बताए ।
कोरोना संक्रमित बिरामीलाई दिइएको यो मात्रा अत्यधिक हो । यो मात्रा अमेरिकी राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थानद्वारा निर्देशित मात्रा भन्दा १६ गुणा बढी हो । संस्थानले बयस्क पुरुषकालागि ९० मिलिग्राम र बयस्क महिलाका लागि ७५ मिलिग्रामको डोज निर्धारित गरेको छ ।
कोरोना संक्रमित विरामीहरुमाथी गरिएको यो प्रयोग चीनमा गरिएको प्रयोगमा आधारित रहेको डा.वेबरले बताए । अधिक मात्रामा भिटामिन सी दिइएका विरामीहरुको अवस्था भिटामिन नदिईएका बिरामीहरुको तुलनामा धेरै राम्रो रहेको डा. वेबरको खोजले पत्ता लगाएको छ ।
डा. वेबरले भने, ‘अत्यधिक मात्रामा दिईएको भिटामिन सीले विरामीलाई कोरोना भाईरससंग लड्न सघाएको देखियो । तर यो उपचार विधिले कोरोना निदानका लागि औपचारिक मान्यता पाइसकेको छैन । त्यसैले यो विधि उपचारको उपायका रुपमा स्थापित भएको छैन ।’
कोरोना भाईरस संक्रमितहरुमा भिटामिन सीको प्रयोग १४ फेब्रुअरीमा चीनको वुहानस्थित झोंगसान अस्पताल मातहतको माहामारी उपचार केन्द्रमा पनि गरिएको थियो । त्यहाँ गरिएको भिटामिन सीको प्रयोगबाट सकारात्मक तथ्य हात लागेको चिनियाँ चिकित्सकहरुले बताएका थिए ।